လုပ်ငန်းအကြောင်းအရာ – GoBit Co., Ltd.
Think Globally , Act Locally.
Tokutei Ginou ဆိုတာ
GoBitသည် ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့လုပ်သားလိုအပ်ချက်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရန် သာမန်လုပ်သားမိတ်ဆက်ရုံတင်မဟုတ်ဘဲ မည်သူမဆိုအလုပ်လုပ်ကိုင်ရလွယ်ကူတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မျိုးကို တည်ဆောက်နိုင်ဖို့အတွက် နိုင်ငံခြားသားလုပ်သားများကို ပြုစုပျိုးထောင်ပြီး ဧည့်သည်ကုမ္ပဏီများကိုအကျိုးပြုသွားပါမယ်
GoBitရဲ့ဝန်ဆောင်မှု ၄ ခု
၁. အရှေ့တောင်အာရှကိုဗဟိုပြုပြီး နိုင်ငံခြားသားအလုပ်သမားများကိုမိတ်ဆက်ခြင်း
ယခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှ မိတ်ဖက်ကုမ္ပဏီနဲ့ပူးပေါင်းပြီး လုပ်သားများကိုမိတ်ဆက်ပေးနေပါတယ်
Training Visa မှ Tokutei Katsudo, Tokutei Ginou Visaများကို ပြောင်းရွှေ့လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ အလုပ်သမားမိတ်ဆက်ခြင်းမှ လုပ်ငန်းခွင်ဝင်သည်အထိ အစအဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်
မြန်မာစကားပြန်များလည်းစီစဉ်ထားခြင်းကြောင့် လုပ်သားတွေအတွက်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်လာရေးကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နေပါတယ်
ထပ်ပြီးမြန်မာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ ဧည့်သည်တော်ကုမ္ပဏီများရဲ့လိုအပ်ချက်နဲ့လိုက်ပြီး ဗီယက်နမ်၊ အင်ဒိုနီးရှားစသည့်နိုင်ငံများကိုလည်း မိတ်ဆက်သွားပါမယ်။
၂. နိုင်ငံခြားလုပ်သားမိတ်ဆက်ခြင်း၊ ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံ
နိုင်ငံခြားလုပ်သားများကိုခန့်အပ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လည်း လုပ်ငန်းခွင်အဆင်ပြေမှုရှိစေရန်နှင့် ကုန်ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်မြင့်မားစေရန် အထောက်အကူများကိုပေးနေပါသည်။ လုပ်သားများကိုအလုပ်ခန့်အပ်ခြင်းတင်မဟုတ်ဘဲ ခန့်အပ်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင်လည်း ပညာပေးခြင်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းများဖြင့် ဝန်ထမ်းများ အလုပ်သမားများအတွက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရအဆင်ပြေမဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်အောင် ပံ့ပိုးပေးနေပါတယ်
၃. နိုင်ငံခြားလုပ်သားများခန့်အပ်ရေးအတွက် အထောက်အပံ့ပေးခြင်း
Tokutei Ginou လုပ်သားများခန့်အပ်ခြင်းအတွက် လိုအပ်သော စာရွက်စာတန်းကိစ္စ၊ စကားပြန်စသည်များကို ကူညီပေးနေပါသည်။ တခါထပ်ပြီး နိုင်ငံခြားသားလုပ်သားများကို ပထမဆုံးခန့်အပ်မည့်ကုမ္ပဏီ၊ ကိစ္စတစ်ခုခုကိုအောင်မြင်အောင်ဖော်ဆောင်ရမည့်ကုမ္ပဏီများအတွက် ပညာပေးအစီအစဉ်နှင့်ထောက်ပံ့ငွေရယူနည်းများကိုလည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။
၄. လုပ်သားမိတ်ဆက်ခြင်းအတွက် အထူးစီမံထားသောsystemတီထွင်ခြင်းနှင့် ရောင်းချခြင်း
GoBitသည် လုပ်သားမိတ်ဆက်ခြင်းအတွက် အထူးတီထွင်ထားသောsystemကို အသုံးပြုပြီး မိတ်ဆက်ကုမ္ပဏီနှင့်အတူထူးချွန်သောနိုင်ငံခြားလုပ်သားများကို ချိတ်ဆက်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ တခါထပ်ပြီး လုပ်သားမိတ်ဆက်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်နေသော ကုမ္ပဏီများအတွက် လုပ်ငန်းပမာဏနှင့်ကိုက်ညီသောsystemတီထွင်ခြင်းနှင့် ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုကိုပါ လုပ်ဆောင်ပေးပါသည်။
▶︎JM Toshin Corporation Co.,Ltd（ミャンマー法人）
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-1-21 新虎ノ門実業会館 5F
有料職業紹介事業 許可番号 13−ユ−311111
登録支援機関 登録番号 20登−003774
© 2022 GoBit Corporation. All rights reserved.